I-HBO Manje Isaphulelo Somfundi (2020) - Ungasifaka kanjani isicelo? - Ungakwenza Kanjani
I-HBO Manje isevisi yokusakaza etholakala ku-inthanethi. Iwebhusayithi igcwele okuqukethwe okuvela kusevisi ye-TV. Kuyindlela ethandwayo namuhla yokubuka eminye imibukiso emnandi. Intsha kulezi zinsuku ihlala ifuna okuqukethwe okusha. 2020 unyaka ogcwele ukuzijabulisa okuhle kakhulu. Wonke umuntu ufuna okusha imibukiso nama-movie ozowasakaza . Ukuhlala unamathele ekhaya kungakhathaza kakhulu ezinyangeni. Abafundi ikakhulukazi bafuna amadili amahle.
Ungahlola lezi zinhlelo futhi uthole okuqukethwe okungabizi. Kulo mhlahlandlela, sizobheka ukunikezwa kwesaphulelo sabafundi se-HBO Now. Sizozama ukuphendula yonke imibuzo yakho maqondana nale nsizakalo.
Ngabe i-HBO Manje Inesaphulelo Somfundi?
I-HBO Manje iyinsizakalo yokusakaza ye-premium. Banesisekelo esincane sabasebenzisi ngokuqhathanisa nezikhulu ezinkulu zokusakaza njengeNetflix.Ipulatifomu ibinikeza isaphulelo sabafundi kubasebenzisi bayo. Okwamanje ayitholakaleli ukusetshenziswa kwababhalisile abasha.
Ukunikezwa kuphele isikhashana esedlule. Abasebenzisi abasha abakwazi ukubamba iqhaza ohlelweni lwesaphulelo sabafundi.Kwakuwuhlelo oludumile kuze kube ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Abasebenzisi asevele bebhalisile bangaqhubeka nokuthola izinzuzo. Izindleko zokubhaliselwe zingaphansi kuphela kwamadola ambalwa.
Izinguquko ku-HBO Manje?
I-HBO njengamanje iqhubeka nenqubo yokuphinda isetshenziswe kabusha. Baguqula ngokuphelele indlela esingasakaza ngayo sisebenzisa insiza yabo. Izinguquko ku-HBO Now zibaluleke kakhulu. Iwebhusayithi ayisasebenzi ngokuphelele kubasebenzisi abasha. Ungabhalisela izinsizakalo ze-HBO online ngokusebenzisa iHBO Max. Isiteji se-HBO Now sishintsha kancane. Manje isiyatholakala kubasebenzisi ngaphakathi kwe-USA kuphela. Iwebhusayithi ye-HBO Now ayisabeli kakhulu. Abasebenzisi abakwazi ukudala i-akhawunti entsha noma babhalisele izinsizakalo zabo.
Izinyathelo zokubhalisela i-HBO Manje Isivivinyo Samahhala:
Isaphulelo sabafundi kungenzeka ukuthi asisekho, kepha usengabhalisa. Kukhona amathani wemibukiso efanele ukusakazwa. Akumangazi ukuba nensizakalo yokusakaza nge-inthanethi yohlelo lwakho lwe-TV oluthandayo. Ungabuya noma kunini ukusakaza isiqephu ophuthelwe yiso. Sithemba ukuthi umhlahlandlela wethu uzokusiza kakhulu ekusakazeni okuqukethwe okuhle kakhulu. Nazi izinyathelo ongazilandela ukuthola imiphumela emihle kakhulu.
Ukuqala ngokubhaliselwe kwakho kufanele uvakashele iwebhusayithi ye-HBO Now. Ungaqala ngokuchofoza kulesi sixhumanisi - https://www.hbomax.com/ . Ikhasi lasekhaya likukhombisa imibukiso ehlukile emangalisayo nama-movie atholakalayo.Ungachofoza ekuqaleni kwenkinobho yakho yesilingo samahhala. Isivivinyo sitholakala izinsuku eziyisikhombisa kubasebenzisi abasha.
Njenganoma yimuphi umhlinzeki wesevisi yokusakaza, kufanele wakhe i-akhawunti ezosetshenziswa. Abasebenzisi kufanele bafake amagama abo, ikheli le-imeyili, bese benza iphasiwedi. Kufanele uqinisekise ukuthi iphasiwedi iphephile futhi ikhululekile ngosizo lwakho. Yamukela imigomo nemibandela ye-HBO Max ukudala i-akhawunti yakho.
Isinyathelo sokugcina kule nqubo ukufaka imininingwane yakho yokukhokha. Abasebenzisi bangangeza amakhadi abo esikweletu noma i-PayPal.Kuzokusiza ukuqala isilingo samahhala. Abasebenzisi bangajabulela izinzuzo zensizakalo uma lolu lwazi lutholakala. Isikhathi sezinsuku eziyisikhombisa sizoqala ngokushesha.
Kuyamangalisa! Manje ungajabulela ukusakazwa okuhle nge-HBO Max.
Intengo ye-HBO Student Discount:
Izindleko zesaphulelo se-HBO Student yi- $ 9.99 ngenyanga (kanye nentela). Yisevisi ye-premium enentengo ephezulu yokubhaliselwe. Abasebenzisi bathola inzuzo ngama-ID abo abafundi. Kulezi zinsuku awukwazi ukuthola isaphulelo nge-akhawunti entsha. Izindleko ziyaqondakala ngokucabangela okubhaliselwe okubizayo. Ukwenza njalo kuzobiza ngaphezulu. Abasebenzisi abadala abanalutho lokukhathazeka nge-HBO Now. Izinhlelo zabo zizohlala zivumelekile kuze kube yilapho isimo sabo somfundi sisebenza kahle. I-HBO ihlala iqinisekisa omazisi bakho ukuqinisekisa ukuthi abafundi kuphela abathola lo mnikelo.
Ngubani ongathola i-HBO Max mahhala?
I-HBO ibuyekeza imigomo yokusetshenziswa kwayo kulo nyaka. Imikhiqizo emisha nezinsizakalo sekuyaziwa kakhulu phakathi kwabantu.
Ipulatifomu yeHBO Max ihlose ukunciphisa ukudilizwa kwabantu. Ababhalisile be-HBO Manje bangaqala ukusebenzisa insiza ye-HBO Max. Abezindaba basebenzisa lesi sibuyekezo kusuka ngoMeyi 27. Abantu ababhalisile be-HBO nge-DTH yabo bangathola nezinsizakalo zabo ze-Max mahhala.
Ungahlola uhlu lwabahlinzeki kusuka kuwebhusayithi esemthethweni. Izinsizakalo ezinkulu ze-TV nezinsizakalo ze-DTH sezivele zine-HBO kungxenyekazi yazo. Abasebenzisi bangangena ngemvume basebenzise imininingwane epulatifomu ye-HBO Max.
Nasi isixhumanisi - https://help.hbomax.com/Answer/Detail/2360 . Uhlu oluphelele lwabahlinzeki bezinsizakalo luyatholakala lapha.
Insizakalo ye-HBO Max inikeza ngamathani wezici. Izinsizakalo zokusakaza seziyathandeka kubantu abaningi. Kubalulekile ukugqama ukuthola ababhalisile abaningi. Iphinde unezela value ukuthenga kwakho. Ake sibheke endaweni yesikhulumi.
1.Buka konke ku-HBO
I-HBO iyi-Studio Studio ehamba phambili. Okutholakalayo okutholakala kungxenyekazi yabo kuyahlaba umxhwele. Siyincoma kubo bonke abafundi bethu. Banemibukiso emikhulu efana neGame of Thrones, Abalindi, kanye nokukhishwa kwakamuva njenge-Euphoria. Okukhethekile endaweni yesikhulumi kuyisizathu esihle sokutshala imali kokuphakathi.
Besilokhu siqonde kokuzijabulisa okuku-inthanethi ngo-2020. Indawo yokuthengwa isesimweni esihle kubo bobabili ohambeni nasekuzijabuliseni kwesikrini se-TV.
Ipulatifomu yokusakaza ingalindela imiphumela emihle uma kukhona okwangempela okuhle kakhulu.Kukunika isikhuthazo esingeziwe sokusebenzisa insiza.Kulezi zinsuku zonke izinketho zokusakaza zikunikeza iqoqo lemibukiso yoqobo. Kukhuthaza abasebenzisi ukuthi bathenge okwangempela.
I-HBO Max inokuqukethwe okusha okusha cishe njalo ngenyanga.Bathembisa imibukiso emisha emangalisayo kuwo wonke u-2020.
3. Ababukeli abaningi
I-HBO Max yipulatifomu emnandi ekuvumela ukuthi usakaze kumadivayisi amaningi kalula. Ungalanda futhi imibukiso nama-movie atholakala esithangamini. Kukusiza ukuthi ugcine idatha ngenkathi ubuka usohambeni. Abasebenzisi bangayidlala kuma-Smartphones abo, ama-TV, Amathebulethi, nakuma-laptops ngasikhathi sinye. Kuya ngamapulatifomu owasebenzisayo.
Lezi ngezinye zezici ezinhle i-HBO Max enikezela ngazo njengamanje. Sincoma ukuthi udlule kuzo futhi uthuthuke.
Akukho okubhaliselwe okusha kwesaphulelo somfundi se-HBO Now okutholakalayo. Ungabhalisela ipulatifomu ye-HBO Max. Izindleko zabo zinengqondo futhi ziyafana nesithangami esidala.Izinsizakalo zitholakala nge $ 14.99 ngenyanga. Kuyimali enengqondo futhi kunciphisa izindleko zakho zokubuka i-TV.
Ngeshwa, asikho isaphulelo somfundi esitholakalayo se-HBO Max.Abasebenzisi bangabuka ezinye iziqephu zamahhala endaweni yesikhulumi. Chofoza lapha - https://www.hbomax.com/watch-free .
Isaphulelo sabafundi se-HBO Manje asisatholakali. Yonke ipulatifomu ibona ukuvuselelwa okukhulu. Siyethemba umqondisi wethu angaphendula konke ukungabaza kwakho. Jabulela isikhathi esihle sokusakaza okuqukethwe okuhle kakhulu.
Ezinye Izipesheli Zabafundi ongazithanda: